Axmed Madoobe oo laga hor istaagay qorshe halis ah
May 23, 2020 Mahad Jama 10
KISMAYO(P-TIMES)- Qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ku eedeeyay inuu doonayo bur burinya maamulkaas oo bah wadaag ay ku yihiin saddexda gobol ee Gedo iyo labada Jubbo.
Siyaasiyiintan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu dadaal iyo dhaqaalaba uu ku bixinayo sidii loo kala qaybin lahaa siyaasiyiinta gobolka Gedo, kuwaas oo inta badan la safan madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa madaxtooyada Soomaaliya ku eedeeyay in ay qas kawado gobolka Gedo ayna ka samaynayso maamul aan hoostagin midka Kismaayo ee Axmed Madoobe uu hogaamiyo.
Maamulka cusub ayaa dhawaan loo magacaabay gobolka Gedo ayaa si toos ah u hoostagaya dowladda federaalka, waxaana talaabadaas waxba kama jiraan ku tilmaamay maamulka Jubbaland.
Xiisadaha gobolka Gedo ayaa soo taxnaa tan iyo sanadkii hore, waxaana ciidamadii Jubbaland la wareegtay dowladda halka gudoomiyaal ay u magacawday degmooyinka gobolka taas oo sii xoojisay xiisadaha Jubbaland iyo dowladda.
War saxaafadiino dhinaca beey ka raran tahay… Burburunta JUBBALAND yaa wada. soo teey nabad ahayd…
Burburinta JUBBALAND XAAR FARMAAJO aa wada.. Maxaa GEDO loo grey CIIDAMO FEDERAAL AH IYO ETHIOPIYAAN aan ka tirsanayn AMISOON.
CAJEEEB… Waa wariyaal laga dhex hadlaayo
Nin weyn sidiisa oo kale u hadal
Siiba wafiyahan puntland times waa mid uu farmaalo ka dhex hadlayo waayo wali maan arag asagoo farmaalo Iyo kheyre ka hadlaya qaladaadkooda marwalba wuxuu cabaareeyaa puntland Iyo jubland sababta puntland ay webkan uga xiri waydayna ma garanayo
Soomaali Federal System ayaay hadda ku dhisantahay oo ciddii Madaxweyne ka noqoneeysa lagu dhaariyaa.
Marka, illaa wax kale oo la isku raacsanyahay la helo, waa in isaga lagu dhaqmaa.
Sidaa darteed, Guddoomiye yaasha laga magacaabayo Gobollada Jubaland waxaa xaq u leh, Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland.
Sidaa darteed, waxan uu Farmaajo Gedo ka wado ee (Central System) u eg waa Fowdo wax ka jirana ma leh.
War iyaga qora websidkaan waa shaqsi aad u neceb puntland, waxaan ka rabnaa inuu noosheego waxa uu puntland ku nacay ama ula colloobay, haddii dambi laga galay xaq ayuu Leeyahay in laga garbo I haddiise cuqdad qabiil uu iska qabo sida dadka qaarkiis Allaha daaweeyo. Waxaanse u sheegi laha wariyahaan saaxiib taariikhda dib u baar qof kaste oo puntland dagaal la galo ama colaad u qaada wuu guuldarraystaa ee tartiib u soco.
Dawladda federaalka oo ku fashilmatey hogaaminta soomaaliya.
UN ta oo Farmaajo iyo Kheyre ku eedeysey in ay ka leexdeyn wadadii wanaagdaneyd ee Sommaaliya lagu hogaaminkaray. Waxay UN ta ku eedeysey Farmaajo iyo Kheyre : 1-in ciidamadii loogu tagalay ladagaalka argagixisada ay u isticmaaleyn danahooda gaarka ah. 2-in aysan latashan madaxda maamul goboleedyada. 3-in ay burburinayaan nidaam ka federaalka soomaaliya ku heshiisey 4-qodobkaan oo ah eedeynta ugu daran, in Farmaajo iyo Kheyre ay suubsheyn gaboodfal dad lagu laayey Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareen.
Wargayska Puntland Times Aad Iyo AAd Ayuu U Fiicanyahay, Qoraaladiisuna Waa War Aduunka Oodhan Markhaati Kayahay Oo Ay Saxaafad Badani Ay Qoreeyso.
Hadaba Yaan Eed Micno Dari Ah Dusha Lagasaarin (Wargayskaan).
Axmed Madoobe Waakhadanyahay Waa Nin Wayn Oo 80 Jir Ah Oo Muslim Ah Gumeeysigii Itoobiya Iyo Kenya Ayuuna Adeegaayaa,
Caasimadii *Muqdisho Mayimaado Ee Nairobi Kenya Ayaa Laga Xukumaa??
Kenya Dhul Ayay Horey Nooga Haysatey, Jubooyinkiina Xoog Ayay Kujoogtaa!.
Hadaba Qofkii Axmed Madoobe Difaacaayoow Shacabka Soomaaliweyn Ayaad Daandaansaneeysaa!! Jawaab Waafi Ah Ayaadna Helidoontaa??.
saaxiib ninka qora webkan dadku si fiican ayay kuu barteen inaad tahay cayaanka baraha bulshada farmaajo lacagta ku bixiyo annaga nagama gadi kartid sheekooyinka raqiiska ah ee nbar iyo naxdin laakiin waxaan kuu sheegayaa lambar 13 sheekadiisa masoconayso. sababta lambarkaa loo siiyay waa nasiib darrada ay u horseedeen laga soo bilaabo 1969 ilaa maanta soddonkii sani dagaalka waad ogeyd imimkana gaajo qalaaso siyaasadeed cudur wax kale sooma kordhin farmaajo xamar doon duleesho ka saara si u badda ugu harqamo oo noociisa daka somaliyeed aan dib ugusoo laaban